Wargays kasoo Baxa Maraykanka Oo Amaanay Talooyinka Nabi Max’ed CS Kaga Hortagi-jiray Cudurada Faafa & Nadaafadda. |
Wargays kasoo Baxa Maraykanka Oo Amaanay Talooyinka Nabi Max’ed CS Kaga Hortagi-jiray Cudurada Faafa & Nadaafadda.
Wargayska ayaa ciwaan ka dhigay, “Awoodda salaadda oo keliya ma joojin kartaa Cudur safmar ah sida CoronaVirus?” Xitaa Nebi Muxammad wuxuu lahaa ra’yi kale.”
Warbixin uu qoray wargayska Mareykanka ah ee Newsweek wuxuu Diirada saaray tacliimaadka Nabigeenu Muxamed CS ee ku saabsan qaadista tillaabooyinka lagama maarmaanka ah ee lagula dagaallamayo Fayrusyada sida Corona, oo ay ugu horreeyaan in lagu nagaado guryaha iyo karantiil.
Joornaalka ayaa soo xigtay tilmaamaha Rasuulkeena Muxamed CS ee ku saabsan nadaafadda, iyo xadiis uu ku talinaya in aan la galin ama laga bixin dhul uu ka jiro cudur dilaa ah, taas maanta aan ugu yeerno ayaa warbixinta lagu yiri Karantiilid.
Warbixinta, oo la daabacay maalintii Khamiista, ayaa cinwaan looga dhigay “Awoodda salaadda oo keliya ma joojin kartaa Cudur safmar ah sida Corona? Xitaa Nebi Muxammad wuxuu lahaa ra’yi kale.”
Joornaalka ayaa sheegay inay jiraan khubaro iyo xeel-dheerayaal ku takhasusay cilmiga difaaca oo ku talinaya ilaalinta nadaafadda iyo karantiilidda, maadaama ay tahay tallaabada ugu wax-ku-oolka badan ee loo xakameeyo Coronavirus, ama looga hortago faafitaanka cudurrada faafa guud ahaan.
Wargayska Newswwek ayaa intaas ku daray in Nebiga Islaamka ee Muxamed uu ku taliya inka badan 1400 sano kahor Nadaafadda iyo Karantiilidda meelaha ay ka jiraan cudurada dilaaga ah.
Wargayska ayaa sheegay in Rasuulkeena ahayn Khabiir ama Xeeldheere dhinaca cudurada dilaaga ah bale waxa uu na siiyay talo fiican si looga hortago ama lagula dagaalamo cudurada sida CoronaVirus.
Joornaalku wuxuu sidoo kale daliishaday Axaadiista Nabiga ee macnaha guud, mid ka mid ah: “Haddii aad Daacuun ka maqasho dhul ha galin, hadii aad ku sugan tihiina, haka bixina.
Majaladda Newsweek ayaa tilmaamtay in Nebi Muxammad sidoo kale uu aad ugu booriyay Aadanaha inay ilaaliyaan nadaafadda kana hortagaan caabuqa, isagoo tixraacaya dhowr xadiis oo ku saabsan arrintaas, kuwaasoo kala ah: “Nadaafaddu waa iimaanka”, iyo “haddii midkiinu hurdada ka tooso, gacantiisa yuusan galin saxanka ilaa uu ka maydho. Saddex jeer… iyo axaadiisyo kale.”
Wargayskaan ayaa sii waday inuu ka hadlo tacliimaadka kale ee Nebi Muxamed CS, oo ku saabsan cudurka iyo baahida loo qabo in la daweeyo.
Axaadiisyada wargayska soo qaatay waxaa ka mid ah, Xadiis macnihiisu ahaa “Is daaweeye, Allah cudur ma keenin ilaa dawadiisa ayuu soo dejiyay, ilaa Gabowga mooyee”
Waxaa xusid mudan in Ururka Caafimaadka Adduunka, iyo mas’uuliyiinta caafimaadka ee waddamada, ay soo saareen tilmaamo ah in la joogteeyo nadaafadda joogtada ah iyo dhaqitaanka gacmaha, si loo tirtiro microbes- (jeermisyada ilmo aragtada ah), waxayna ku taliyeen in guryaha lagu sugnaado si loo xakameeyo Cudurka CoronaVirus.
Cinwaanka warbixinta joornaalka Mareykanka ee Newsweek waxaa ku cad in cudurada sida CoronaVirus aan lagu wajahin kaliya duco iyo Salaad, laakiin taasi baddalkeeda waa in lala yimaadaa Asbaabo, isaga oo wargayska tixraacaya amarada Nabi Muxamed CSW.
Halkan ka akhriso maqaalka wargeyska Newsweek